Ntuziaka sara mbara ma doo anya ka ị bụrụ onye uwe ojii 👮🏻👮🏻‍♀️ - Ne gerekir?
A sara mbara ma doo anya na ndu ịbụ onye uwe ojii Police
Kedu ka m ga - esi bụrụ onye cop? Kedu ihe bụ ọnọdụ nke ịbụ onye uwe ojii? PYMO, POMEM, PAEM,
Kedu ihe bụ kọleji ndị uwe ojii?
Ọ nwere mmekọ na General Directorate nke Nche. Ọ bụ ụlọ akwụkwọ ochie ejiri ejiji na akwa ndị gọọmentị. Emechiri ya n'ime oke nke ngwugwu Nchekwa Esịt ma wega ya na ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ metụtara na Ministry of National Education.
Kedu ụlọ akwụkwọ ndị uwe ojii?
Ebumnuche ya ọ dị mkpa maka ndị isi, ndị nlekọta na ndị njikwa nke Ngalaba ndị uwe ojii. Ọ na - eduzi ogo mmụta, agụmakwụkwọ gụsịrị akwụkwọ, nyocha sayensị, mbipụta na ndụmọdụ. O nwere ikike, ulo akwukwo na ulo akwukwo ndi uwe ojii. Ọ bụ ụlọ ọrụ agụmakwụkwọ ka elu nke nwere ikike sayensị.
Ọnọdụ niile maka ịbụ onye uwe ojii
Bụ nwa amaala nke Republic of Turkey
Bụ ụlọ akwụkwọ sekọndrị, gụsịrị akwụkwọ na / ma ọ bụ gụsịrị akwụkwọ na kọleji
Ọ bụrụ na ị gụsịrị akwụkwọ n'ụlọ akwụkwọ esenidụt, na-enweta akwụkwọ nha anya
Iji nyefee akara ntọala KPSS achọrọ, iji nweta akara nke opekata mpe 240-300 sitere na TYT dabere na nsogbu
Nọ n'okpuru afọ 26 maka PYMO, ọ bụghị n'okpuru afọ 30 maka POMEM
Candidatesmụ nwoke toro ogologo karịa 167 cm, ụmụ nwanyị toro ogologo karịa 162 cm
Izute ọnọdụ nke ụkpụrụ ahụike
Enweghị ihe mgbochi iji ebu ngwá agha
Enwetaghị ntaramahụhụ ọ bụla nke ihere
Havingnweghi akara, egbugbu na scars doro anya na oghere gị na mechiri emechi
Agaghị achụpụ ya n’ụlọ akwụkwọ n’ụzọ ọbụla
Gwa Turkish okwu n'enweghị ntụpọ
Enweghị onye ikpe maka mpụ ọ bụla
"Ọ ghọrọ nwa akwụkwọ ndị uwe ojii nke ndị uwe ojii" si n'ụlọ ọgwụ steeti. nwee akwụkwọ akụkọ ahụike gụnyere ndekọ
Enweghị enweghị ntụpọ n'echiche akụkụ ahụ
Ọdịdị ahụ dị mma n’ụzọ niile na ọdịdị ahụ dị nro
Nke mbụ, ụkwara nta, ọ bụghị ịbụ larịị ụkwụ na-adabara ọnọdụ ahụ ike
Gịnị bụ PYMO?
Schoolslọ akwụkwọ Ọrụ Aka Ndị Uwe ojii (PMYO) dịịrị iji gboo mkpa ndị uwe ojii nke Ngalaba Ndị Uwe ojii. Na-eme mmụta na ngwa na ogo ogo. O jikọtara ya na ndị isi ndị isi ụlọ akwụkwọ ndị uwe ojii. Ha bụ ụlọ ezumike na ụlọ ọrụ gọọmentị na-ahụ maka agụmakwụkwọ ka elu. N’ikwu ya n’ụzọ ọzọ, ọ bụ ụlọ akwụkwọ dị afọ abụọ nke ị ga-amụ mgbe ụlọ akwụkwọ sekọndrị gasịrị.
Gịnị bụ POMEM?
Lọ Ọrụ Ọzụzụ Ndị Uwe Ojii (POMEM) na-azụ ndị uwe ojii mkpa nke Ngalaba Ndị uwe ojii. Ha bụ ụlọ akwụkwọ agụmakwụkwọ na-enye ọzụzụ aka ọrụ. Mụ akwụkwọ nwere iru eru achọrọ n'aka ndị gụsịrị akwụkwọ na ngalaba afọ 4 were ndị mmeri na-aga nke ọma na ule ahụ. A na-enye ndị mmeri a ọzụzụ maka ihe na-erughị ọnwa isii. Yabụ, ọ bụ ebe a na-azụ ọzụzụ yana opekata mpe ọnwa isii ị ga-enweta mgbe mahadum gachara.
Kedu ihe chọrọ PYMO na POMEM chọrọ?
Gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ndị kwekọrọ
Maka mmezi afọ mere ka afọ 18 gachara, afọ tupu mgbazi dị irè. Mụ nwanyị ga-abụ 01 afọ site na 18 Ọktọba nke afọ a na-eme ule ahụ. Candidatesmụ nwoke ndị na-anaghị agha agha ga-erughị afọ iri abụọ na anọ.
Maka ụmụ nwoke ndị ga-emecha ọrụ agha ha, ha agaghị eru afọ iri abụọ na isii.
Inwe akara achọrọ site na ule abanye mahadum ga-eme site na Nhọrọ Ndị Mmụta na Ebe Ntinye (ÖSYM)
Successga nke ọma na Nyocha PMYO
Gịnị bụ PAEM?
Traininglọ Ọrụ Ọzụzụ Ndị Isi nke Ndị uwe ojii (PAEM) Academylọ akwụkwọ ndị uwe ojii na-azụ ndị isi na ndị isi ọkwa maka isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii. Ọ bụ ụlọ akwụkwọ mahadum kwekọrọ na Ankara. The Academy na-enye nchịkwa akara ugo mmụta mbụ, akara ogo na agụmakwụkwọ postgraduate. Na mgbakwunye na agụmakwụkwọ, ndị otu nkuzi na-eme nyocha sayensị na mbipụta ma nye ọrụ ndụmọdụ. Ọ bụ ụlọ ọrụ ọzụzụ ebe ị nwere ike ịbanye mgbe ị rụchara ọrụ afọ abụọ.
Kedu ihe chọrọ ngwa maka PAEM?
Iji nwee ihe ịga nke ọma n'etiti ndị mmeri a na-akpọ ka ha nabata ngwa ahụ, nyocha tupu ahụike na nyocha ahụ nke anụ ahụ (yabụ, ị ga-enwe ikike isonye na nyocha Ajụjụ Ọnụ / Oral.)
Emechara afọ abụọ na ọrụ dị ka ụbọchị nke ngwa
Nọ n'okpuru afọ iri anọ na ise dịka nke 31 Disemba nke afọ a na-eme ule ahụ
Akara arụmọrụ dị mma n'ime afọ abụọ gara aga Na-anatabeghị ntaramahụhụ oge dị mkpirikpi n'ime afọ abụọ gara aga na nkwụsịtụ ogologo oge n'ime ndụ ọkachamara.
Emeghị ya nchọpụta ikpe ma ọ bụ nhazi maka mpụ nke ga-achọ ntaramahụhụ maka ịchụpụ ọrụ ma ọ bụ ọrụ obodo.
Esemokwu dị iche na PYMO, POMEM na PAEM
Oge agụmakwụkwọ na PYMO bụ afọ 2 na POMEM dịkarịa ala ọnwa isii. Ndị nọ na PAEM na-anata ọzụzụ ọnwa 6.
Ndi umu akwukwo choro isonye na PYMO ekwesighi idi n'okpuru 26. Ndi umu akwukwo choro isonye na POMEM agaghi adi n’okpuru 30.
Ndị gụsịrị akwụkwọ ga-anwale ule TYT maka ịzụrụ PYMO. Maka ịzụrụ POMEM, achọrọ ndị gụsịrị akwụkwọ ka ha were nyocha KPSS.
Ndị gụsịrị akwụkwọ na POMEM ji akara 8/1 bido ọrụ ha. N'aka nke ọzọ, ndị gụsịrị akwụkwọ na PYMO malitere ọrụ ha na akara 9/1.
Ndị na-abanye na ndị gụsịrị akwụkwọ na POMEM dị ka ndị gụsịrị akwụkwọ na-agụghị akwụkwọ tozuru oke iji nyocha Assistant Commissioner mgbe ha rụchara ọrụ afọ 2. Ndị gụsịrị akwụkwọ na PMYO nwere ikike ile ule a mgbe ha rụchara ọrụ 4 afọ.
Kedu ihe bụ Institute of Security Sciences?
N'okpuru Ngalaba, ọ na-eme agụmakwụkwọ postgraduate, nyocha sayensị, nyocha na mbipụta akwụkwọ na usoro ọzụzụ dị mkpa. Ọ bụ ụlọ akwụkwọ dị elu nke na-azụ ndị ọrụ agụmakwụkwọ.
Ọrụ nke, ụkpụrụ ọrụ na usoro nke Institutelọ Ọrụ na-achịkwa Iwu nke Mmụta Kasị Elu nke ndị uwe ojii, Iwu gbasara Nhazi nke oflọ Ọrụ Ndị Ọchịchị Ndị Uwe Ojii, Iwu nke Nhazi, Ọrụ na Ọrụ nke Academylọ Ọrụ Ndị Ọchịchị Ndị uwe ojii, na Usoro Mmụta na Ọzụzụ nke Postgraduate nke Policelọ Ọrụ Ọzụzụ Ndị Ọzụzụ Ndị uwe ojii.
Kedu ihe bụ Institute of Forensic Sciences?
Ebumnuche ya bụ ịzụ ndị ọrụ agụmakwụkwọ na ndị ọrụ aka n'ọhịa nke General Directorate of Security and Police Academy Presidency chọrọ. Iwu nyocha na nkwadebe nke Policelọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị Uwe Okpukpe nke Forensic Sciences na mmanye nke iwu akwadoro ka na-aga n'ihu. A ga-anabata nnabata ụmụ akwụkwọ mgbe ịmanyechara iwu anyị.
Na ọkwa nke mụọ akwụkwọ ụmụ akwụkwọ, ntinye akwụkwọ anamachọihe, ụbọchị itinye akwụkwọ na ihe ndị ọzọ achọrọ wdg. A ga-eziga akwụkwọ na weebụsaịtị ndị uwe ojii.
Ndụmọdụ 7 maka ndị chọrọ ịbụ onye uwe ojii 😍
I nweghi otu plan
Ọ dị mma ilekwasị anya n’otu ihe karịa ọtụtụ ihe. Mana a ga-enwe ọtụtụ usoro ị ga-esi na-arụ ọrụ uwe ojii nke ị nweghị n'aka gị. Nsonaazụ nke usoro ndị a, nke daberekwa na arụmọrụ gị, nke kachasị dabere na ọrụ ga-ahọrọ gị. Ọ bụ ya mere anyị ji akwado ka ịnwe atụmatụ ọzọ dịnụ. Enweghị ihe dịka ihe na-agaghị ekwe omume, adala mba ma nọgide na-agbalị ọzọ!
Ekwela ka ụjọ jide gị site na ndị uwe ojii, yana ọkwa yana ọnọdụ siri ike. Ọ bụrụ na ọrụ a bụ nrọ gị, ị ga-eme ya taa ma ọ bụ echi.
Agala n’okporo ụzọ a naanị n’ihi na ego dị ezigbo mma!
Ọ ga - abụ nnukwu mmejọ gị na ndụ gị ma ọ bụrụ na ịbanye ndị uwe ojii naanị n'ihi ezigbo ego. Ihe ịma aka nke ịrụ ọrụ ịhụnanya ga-abụ oge kachasị siiri gị ike ma sie ike n’ụwa. Ọrụ mberede nwere ike ibilite. Inweghị ike iji ezumike ezumike gị oge ọ bụla ịchọrọ, belụsọ ma ndị isi gị enye gị ikike. Enwere nnukwu ọrụ. May nwere ike ịrụ ọrụ ọbụlagodi na ikike ndị ọchịchị.
May nwere ike ikwenye n'ihe niile, chee maka ya…
Ga-etinye ọrụ gị mgbe niile. Mgbe ụfọdụ, a ga-enwe oge mgbe ị ga-akarị. Ndụ gị, ezinụlọ gị, na gburugburu gị ga-abụ nke abụọ. Nwere ike ịrụ ọrụ 7/24. Ọrụ ụlọ / mba ọzọ nwere ike ibili na mberede. Ihe ọ bụla na - eme, ịnweghị ike ịjụ ọrụ ndị a, nke nwere ike ịbụ nsogbu. May nwekwara ike ịga njem na mpaghara ọwụwa anyanwụ karịa otu oge.
Merie ụjọ ị na-atụ maka ajụjụ ọnụ
E kwuwerị, ọtụtụ mmadụ na-anwale ule a, ọ bụghị naanị gị. Ajụghị nnukwu ajụjụ dị mgbagwoju anya. O nwere ike bụrụ ihe ga-aba uru karịa iji nwee ike iji obi ike kwuo na amaghị m.
Ọ dị mfe ịbụ onye cop mgbe ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ mgbe mahadum gachara?
Na mahadum ị kwesịrị ịmara onwe gị ma hụ ihe ị nwere ike ime. Na ngwụcha mahadum, ị ga-ahụ onye hụtụrụla ọtụtụ ihe ma mara onwe ya nke ọma. Ọ bara uru ịchọpụta ma ị ka chọrọ ọrụ a. Yabụ ọ bụrụ na ịnụ ụtọ mahadum gị dị gị mkpa, ọ nwere ike ịbụ ihe ziri ezi ịmalite mgbe ị gụsịrị kọleji.
Nke a ga - eme ka ị chee na ọ nọ ná mkpa, enweghị ntụkwasị obi na enweghị isi maka oge ndụ gị niile. E wezụga nke ahụ, ịnweghị ikike ihe dị otú ahụ, ọtụtụ mmadụ na-etinye mgbalị na mbọ n'ụzọ dị otú a. Tupu ịmalite ime nke a, anyị na-ekwu iche ọzọ.
Ajụjụ maka comingghọ onye uwe ojii
Agụrụ m ụlọ akwụkwọ sekọndrị na mba ọzọ. Kedụ ka m ga - esi bụrụ onye uwe ojii na Turkey?
Iji nweta akwụkwọ nke nha anya site na Ministry of National Education na ụlọ akwụkwọ ị gụsịrị akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ndị dị na Turkey
Maka mmezi afọ mere ka afọ 18 gachara, afọ tupu mgbazi ahụ ga-adị ire. Mụ nwanyị ga-agwụla afọ 01 ka ọ dị na 18 October nke afọ ule ahụ. Candidatesmụ nwoke ndị na-anaghị aga agha ga-erubeghị afọ iri abụọ na anọ. Maka ụmụ nwoke ndị ga-emecha ọrụ agha, ha agaghị eru afọ iri abụọ na isii.
Iji nweta akara achọrọ site na nyocha nke mahadum ga-eme site na ndị isi oche nke nyocha, nhọrọ na ebe ntinye (ÖSYM)
Ga nke ọma na PMYO ederede (ule) ule
Enwere m ike itinye akwụkwọ maka ule PYMO na Kaza-i Rüşt?
Kaza-i Rüşt pụtara iweta onye na-abụghị Reşit (okenye) ruo ọtụtụ afọ (okenye) site na mkpebi ụlọ ikpe.
Enweghi mgbanwe na afọ na ụbọchị ọmụmụ nke ndị mmadụ na mkpebi banyere ihe mberede-i rüşt. Ya mere, a gaghị ewere akwụkwọ anamachọihe gị dị ka nke ziri ezi ma bụrụ nke ndị isi oche na-atụle.
A na-etinye ndokwa dị iche iche maka ndị di na nwunye na ụmụaka nke ndị ọrụ uweojii na ngalaba PMYO?
Ndị di ma ọ bụ nwunye ma ọ bụ ụmụ nke ndị nwụrụ n'ihi okwukwe ma ọ bụ ndị nwere nkwarụ (ndị nwere ọrịa ọrụ) nke Ngalaba Ndị Uwe ojii ga-ekwenyerịrị n'ọnọdụ nnabata na ha ga-abụ "ụmụ akwụkwọ na-aga akwụkwọ na-ahụ maka ọrụ aka ndị uwe ojii." Ọ bụrụ na emere mkpebi ahụ, ha nwere ikike ịnwale ule edere ede.
Ha ga-enwerịrị opekata mpe 1/3 nke akara kachasị elu n'ule edere nke otu nwoke ma ọ bụ nwanyị nọ. Mgbe ha mechara nke a, a na-etinye ha na ndepụta ndị isi aha ha. Ndi mmadu anabatara n'ime akuku a ka ewepuru site na oke achoro n'afọ ahu.
Abụ m onye gụsịrị akwụkwọ (mahadum 2 afọ) gụsịrị akwụkwọ, enwere m ike itinye akwụkwọ maka ule PMYO?
Ọ bụrụ n’ị gụsịrị akwụkwọ n’ụlọ akwụkwọ sekọndrị ma ọ bụ ụlọ akwụkwọ ndị ọzọ, ị nwere ike itinye akwụkwọ maka ule PYMO. Enyere ndị gụsịrị akwụkwọ na kọleji ogo dị iche iche karịa ndị ọzọ gụsịrị akwụkwọ na kọleji.
Kedu mgbe PMYO na-enyocha ngwa na ule na-eme?
Oge ntinye, ọnọdụ na ozi zuru ezu gbasara ụmụ akwụkwọ nke mentlọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị uweojii na-emelite kwa afọ ma gwa ndị PMYO Student Candidates niile na weebụsaịtị nke General Directorate of Security na Police Academy na Machị-Eprel.
Ezinụlọ m ọ bụla nwere ihe ndekọ e mere mpụ. Agaghị achụpụ m PMYO?
Ọbụna ma ọ bụrụ na oge akọwapụtara na Nkeji edemede 53 nke Turkish Penal Code agafeela; N'ihi ime mpụ kpachaara anya nwee ntaramahụhụ kachasị mkpọrọ otu afọ ma ọ bụ karịa na mpụ ndị edepụtara na Nkeji edemede 657 / A-48 nke ndị ọrụ bekee na-arụ Nr.
Nkwenye ọ bụla ọbụlagodi ma ọ bụrụ na agbaghala ma ọ bụ machibido ikike enyerelaghachi
N’abụghị mkpebi ịkwụsị itinye mkpebi ikpe
Enweghị ikpe na-aga n'ihu. Ma ọ bụ, ọ bụrụhaala na ndị ikpe ahụ anaghị ebute nkwekọrịta; Naanị ihe ndekọ omempụ nke nwa akwukwo PMYO na nwunye ya ka a na-atụle.
Ndi mmebi iwu nke ndị ikwu m ma abụghị mụ na di m gbochiri m ịbụ onye uwe ojii?
Mpụ mpụ sitere na ndị ikwu gị na abụghị gị na di ma ọ bụ nwunye gị anaghị egbochi gị ịbụ onye uwe ojii.
Ihe akara m na-enweta na nyocha PMYO na-emetụta ule m dere (ule)?
Ihe akara ị nwetara n’ule ahụ na-ahụ maka ihe ọmụmụ ahụ, nyocha ọgụgụ isi ọkachamara na nyocha nke ajụjụ ọnụ agaghị emetụta akara nnabata ụlọ akwụkwọ Ọzụzụ Ndị Uwe ojii.
Banyere isi ihe ndị enwetara, "ụlọ akwụkwọ aka ọrụ ndị uwe ojii na-aghọ nwa akwukwo." ma ọ bụ "voclọ akwụkwọ ọrụ aka ndị uwe ojii enweghị ike ịbụ nwa akwukwo nwa akwukwo." A na-ewere ya dị ka ihe ndabere maka ịme mkpebi.
Enwere m ike ịjụ nnwale PMYO dere (ule)?
Nwere ike ịjụ ule ederede (ule). Ekwesịrị ịmegide toSYM Ndị isi ala.
M gafere ule PMYO dere (ule). Emeela atụmatụ m. Enwere m ike ịgbanwe kọleji gị?
A na-eme atụmatụ nke kọleji na gburugburu ebe obibi dị ka njirisi nke ndị isi oche kpebiri. Ya mere, enweghi ike igbanwe ebe gi n'uzo obula dika emechara usoro a mgbe emechara atumatu.
Kedu ọnọdụ ọnọdụ ahụike achọrọ na ule nnabata PMYO?
Anyị hụrụ gị Ngalaba Uwe Okike Nhazi Ahụike maka gị. Iru iwu Pịa ebe a.
Ebee ka m nwere ike ịchọta akara ngwa PMYO m, ozi gbasara ụdị ule na ụbọchị itinye akwụkwọ?
Maka ndị ụlọ akwụkwọ ndị uweojii na-ahụ maka itinye akwụkwọ maka akwụkwọ anamachọihe, ụbọchị nyocha na usoro nyocha nke akwụkwọ achọrọ Pịa ebe a.
Nwere ike ịchọta nkọwa zuru ezu banyere ule PMYO na ebe nrụọrụ weebụ gọọmentị nke ndị isi ndị uwe ojii uwe ojii.
M gụsịrị akwụkwọ na Open Education Faculty, Department of Police Education, 2-afọ ogo ogo. Enwere m ikike ịbụ onye uwe ojii?
Ọ bụrụ na ị gụsịrị akwụkwọ na ngalaba agụmakwụkwọ Open Open, Ngalaba Mmụta Ndị Uweojii, mahadum afọ abụọ, ị nweghị ikike ịbụ onye uweojii dịka ndị gụsịrị akwụkwọ na Vlọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị uwe ojii.
Iji bụrụ onye uwe ojii, ị ga-agụrịrị na Ulo Ọzụzụ Ndị Uwe Ojii.
Enwere m nsogbu ezinụlọ ma ọ bụ nke ego. Enwere m ike ịfefe na Vlọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị uwe ojii ọzọ?
A na-eme atụmatụ maka kọleji na kọmpụta dị ka njirisi ndị isi oche kpebiri. Ya mere, ebe gi apughi igbanwe ya n’uzo obula dika emechara usoro a mgbe emechara atumatu.
Enwere m ike ịlụ di na nwunye mgbe m na-agụ akwụkwọ na Vlọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị uwe ojii? Enwere ntaramahụhụ ọ bụla ma m lụọ di?
Mgbe ị bụ nwa akwụkwọ, ị nweghị ike ịlụ di ma ọ bụ nwunye. Ọ bụrụ na ị lụọ di na nwunye n'agbanyeghị nke a, a ga-ejedebe mkpebi gị site na mkpebi ndị isi oche yana nkwado nke Onye isi ala mgbe akwụkwọ onye isi ụlọ akwụkwọ ahụ kwuchara.
Ahapụrụ m ụlọ akwụkwọ ahụ maka ihe ụfọdụ mgbe m na-agụ akwụkwọ na High School Vocational High School. Enwere m ike ịlaghachi ọzọ?
N’ebe ọ bụla nke ọzụzụ nghazi, ị nwere ikike ịhapụ kọleji site n’itinye arịrịọ ị ịhapụ kọleji nwere akwụkwọ ederede na School Directorate.
Ewezuga ndokwa nke Iwu Ahụike, ọ bụrụ na ịhapụ ma ọ bụ chụpụ gị na kọleji, ị nweghị ikike itinye akwụkwọ maka ule nyocha College ọzọ. Ọ bụrụ na ịhapụ kọleji gị, a ga-agwa gị nke a na ederede, ka ị na-arịọ ịhapụ. Nweghị ike ịlaghachi akwụkwọ ozugbo enyere gị ọkwa edere mgbe ịpụchara ma ọ bụ chụpụ gị. A naghị anabata arịrịọ gị ịlaghachi na enweghị ike ịnabata gị na kọleji.
Ọ bụrụ na m hapụ kọleji aka ọrụ ndị uwe ojii maka ihe ọ bụla, a ga-akwụ m ụgwọ ọ bụla?
Na agbanyeghị ma ha gụsịrị akwụkwọ na kọleji ma ọ bụ na ha agụghị, ndị gbara arụkwaghịm ma ọ bụ mee mpụ nke chọrọ ka a chụpụ ya, na ndị hapụrụ ihe ọ bụla ọzọ karịa ọnwụ ma ọ bụ ihe ahụike, nwere ike ịrịọ ụgwọ maka mmefu agụmakwụkwọ ha dịka akụkụ nke akụkụ ha na-efu ibu ọrụ
Ha ga-akwụ ụgwọ a dịka ndokwa nke Policelọ Ọrụ Ndị Ọchịchị Ndị uwe ojii na-akwụ. A na-achọ ịkwụ ụgwọ site n'aka ụmụ akwụkwọ hapụrụ ma ọ bụ hapụ ha n'ụbọchị mbụ nke agụmakwụkwọ.
Kedụ ka m ga-esi nweta usoro ọmụmụ nke nkuzi a na-akụzi n'ụlọ akwụkwọ Ọzụzụ Ndị Uwe Ojii?
Ọ dị ma ọ bụrụ na itinye akwụkwọ na kọleji ị na-amụ na. N'okpuru ebe a bụ isiokwu anyị kwadebere maka usoro nke dejupụta akwụkwọ arịrịọ ahụ, pịa iji gaa ngalaba ahụ.
Kedu nkuzi ndị a na-akụzi na Schoolslọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị uwe ojii?
A na-ebipụta aha ọmụmụ ihe ndị a na-akụzi na Vlọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị uwe ojii na nkuzi na ngalaba ha ọdịnaya na www.pa.edu.tr.
Enwere m ike ịpụpụ na nkuzi m na ngalaba na kọleji ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ha bụ otu ihe na nke ụlọ akwụkwọ PM Schools?
Enweghị ike ịhapụ gị agụmakwụkwọ ndị a.
Enwere m ike ịnweta akwụkwọ mmụta mgbe m na-agụ akwụkwọ na Policelọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị uwe ojii?
N’ụlọ akwụkwọ ndị aka gbasara ndị uwe ojii, a ga-akwụ gị ụgwọ na uwe ndị uwe ojii. Gọọmentị na-ekpuchi ebe obibi gị, ebe obibi gị, mmefu ahụike gị yana ego ndị ọzọ. Yabụ, agụmakwụkwọ enweghị ajụjụ.
Agụsịrị m akwụkwọ n’ Schoolslọ Akwụkwọ Ọzụzụ Ndị Uwe Ojii. Kedụ ka aga - esi ahọpụta m n’ọrụ ndị otu nzukọ?
Mgbe ị gụsịrị akwụkwọ, dịka ndị ọrụ na mkpa ọrụ si dị, a na-ewere ọkwa ịga nke ọma nke ụmụ akwụkwọ na ụlọ akwụkwọ ọ bụla dị ka ntọala. A na-eme ọhụhụ maka mpaghara ndị General Directorate kpebiri.
A na m agu akwukwo na ulo akwukwo ndi uwe ojii. Enwere m ike ịfefe na ngalaba ndị uwe ojii ndị uwe ojii nke nchekwa sayensị?
Mgbe ị na-agụ akwụkwọ, ịnwere ike ịgafe Examlọ Akwụkwọ Ọchịchị Ndị Uweojii nke Nyocha sayensị na ịdebanye aha. Nwere ike ịgbanwe na-enweghị ajọ mbunobi na ọrụ amanyere bụ iwu na ịkwụ ụgwọ ndokwa.
Achọrọ m transcript (transcript), akwụkwọ ngụsị akwụkwọ ma ọ bụ usoro ọmụmụ. Kedụ ka m ga-esi nweta ya?
Dee ozi ịkpọtụrụ gị (TR ID Number, Aha na Aha nna).
Na arịrịọ ahụ, gosi ihe kpatara ịchọrọ akwụkwọ dị mkpa.
Na arịrịọ ahụ, gosipụta na itinye ego ndị a n'ime nọmba akaụntụ TR560001000743000010005009 na Gölbaşı Malmüdürlığı Ziraat Bankası Gölbaşı Alaka, ya bụ, akwụkwọ nnata ụlọ akwụkwọ ahụ akwadoro. (Anabataghị akwụkwọ ndekọ ego na Internetntanetị.)
Nwere ike izipu arịrịọ gị.
Gwọ a ga-akwụ na Gölbaşı General Directorate
Gwọ Obibi na Ule: 75 TL
Akwụkwọ gụsịrị akwụkwọ: 20 TL
Ntụle diplọma: 30 TL
Ntughari: 20 TL
Usoro ihe omumu site na nkuzi: 5 TL
Usoro ihe omumu maka otu akwukwo akwukwo: 50 TL
Usoro ọmụmụ maka agụmakwụkwọ: 70 TL
Usoro ọmụmụ maka afọ abụọ agụmakwụkwọ: 120 TL
Usoro ihe ọmụmụ maka afọ anọ agụmakwụkwọ: 200 TL
Isi mmalite nke edemede a, nke anyị meworo ka anyị nwee nghọta karịa site na ịnweta ozi ahụ, bụ www.pa.edu.tr (Academylọ Ọrụ Ndị Ọrụ Ọchịchị Ndị uwe ojii). Pịa ka ịlebe Iwu Iwu Ọzụzụ Ndị Uwe Ojii.
Ndi ntuziaka anyị kwadebere gị dị gị mma? Echiche gị dị anyị mkpa, anyị na-atụ anya ikwu gị! 😊
Nnukwu Ihe Ntanetị Ozi